Mik. 1-7: ANTSO HO AN'NY FAMONJENA
1. Ho an'ny jentilisa
2. Ho an'ny firenena rehetra
3. Ho an'ny malahelo
Lio 19. 1-10: IZAY MANGETAHETA FAMONJENA
1. Mitady an'i Jesoa Mpamonjy
2. Mampiditra an'i Jesoa Mpamonjy
3. Miala amin'ny ratsy faanao
Tit 2. 6-15: NY ANDRAIKITRINY NY OLOM-BOAVONJY
Titosy dia lehilahy Jentilisa (Grika) noiva fo ka tonga zanaka ara-panahin'i Paoly. Tomna mpiara-miasa mahatoky tamin'i Paoly teo amin'ny asa fanompoana izy. Eto amin'ity Tit 2, 6-15 ity dia no anomezana toro-maroka an'i Titosy amin'izay andraikitra tokony ho tanterahany. Mampiavaka ny olom-boavonjy tokoa manko ny fanompoana ka izany no hanomezantsika loha-hevitra ity perikopa ity hoe : NY ANDRAIKITRINY NY OLOM-BOAVONJY.
1- Mijoro ho vavolombelona (an 7-8).
Araka ny teny fiarahabana ataon'i Paoly an'i Titosy (Tit 1,1) dia nikelezan'i Paoly aina ny hampandroso finoana ny olom-boafidin'Andriamanitra sy hananatra azy mba hanaraka ny toe-panahy arakan'Andriamanitra. Anarin'i Titosy eto (Tit 2,8) mba ho modely, ho fakan-tahaka ny olona. Izany hoe hijoro ho vavolombelona amin'ny fitondran-tena, mba tsy ho mpitari-bato vilam-bava. Amin'ny zavatra rehetra dia nanarina i Titosy mba ho fitaratra ho an'ny Fiangonana tsy tokony ahitana tsiny ny fiainany, ary izay ampianariny dia tsy tokony ahitan'ny olona hitsikerana azy. Ny olona rahateokoa dia mitsara azy araka ny fiainany taloha, ka raha misy fahatsininy dia hitenen-dratsy azy. Tahaka izay indrindra no nahazo an'i Zakaiosy, lehilahy mpanota nanana fanampahan-kevitra hihaona tamin'i Jesoa eo amin'ny fiainany nefa nimonomononan'ny olona ihany (Lio 19.7).
Ry kristiana havana, inoana fa tena kristiana efa nandray ny famonjena ianao fa tsy kristiana anarana fotsiny. Izay takiana amin'ny olona efa nandray ny famonjena (MINO) dia ny hijoro vavolombelona (ASA) eo amin'ny fitondran-tena mba tsy hanala-baraka ny anaran'Andriamanitra sy ny anarana isalorantsika (Kristiana, Mitandrina, Mpiandry, ...). Misy ny fenitra na ny toe-panahy takony hananan'ny olom-boavonjy. Tsarovy mandrakariva fa ny toetra maha izy azy antsika dia ambony lavitra noho ny fahaizana mampianatra sy mitory teny. Noho izany, aoka ho mendrika eo amin'ny fitondran-tena sy ny hatao rehetra hahataona olona ho vonjena koa. Amin'izay maha alahadin'ny STK ity anio ity, tanora fianarana isika amin'ny zavatra rehetra: finoana, fitiavana, fitondran-tena. Ny tena fampianarana mahomby dia ny manao fa tsy ny miteny (mibaiko). Izany hoe alohan'ny hananatra olona dia tsara ny mitondra tena tsara. Izay indrindra no idirantsika amin'ny lafin-javatra faharoa. Ny andraikitriny olom-boavonjy dia:
2- Mananatra ny hafa (and 6, 9-10):
Asain'i Paoly mananatra tsara ny olona i Titosy. Fananarana roa o hita eto:
Ny fananarana voalohany, momba ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra 'and 6). Anarina mba hahay hifandray amin'Andriamanitra mandrakariva ny olona. Ny fahononan-tena manko dia iray amin'ireo vokatry ny Fanahy izay mitoetra eo amin'ny olona. Ny olona manana ny Fanahin'Andriamanitra no afaka hanonon-tena hahatohitra ny filan'ny nofo. Noho izany, anarina ny olona, indrindra ireo vao mitombo amin'ny finoana (tanora fanahy) mba hiaina ny vokatry ny fanahy, hanaaraka ny sitrapon'Andriamanitra.
Ny fananarana faharoa, momba ny fifandraisan'ny Tompo sy mpanompo no lazaina eto. Nanjaka loatra tamin'izany vanim-potoana izany ny fanandevozana sy ny fanaovana tsinotsinona ny hafa, indrindra fa ny mpanompo. Ny mpanompo ihany koa dia nanao tsinontsinona ny tompoka tsy natoky tamin'izany maha mpanompo azy izany. Izany hoe fanana fitiavana sy fanajana.
Ry havana, ny olona efa nandray ny famonjena dia miezaka ny hananatra ny hafa ihany koa amin'izay rehetra tsy mety ataony. Tsy hizara arina an-tava, na hizaha tavan'olona ho tenenina. Anarina ny olona mba hifikitra amin'Andriamanitra, manaiky hotarihin'ny Fanahy Masina mba hahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Aseho eo amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona izany fananana ny Fanahin'Andriamanitra izany, ka hanehoana fitiavana ny hafa.
Farany, raha fehezina fohy izay voalaza, andraikitry ny olom-boavonjy ny mananantra ny hafa mba ho mendrika araka an'Andriamanitra ny olona ary hotsara fifandraisana eo amin'ny olona samy olona ihany koa. Sarotra anefa ny hiteny olona raha toa ka ny mpananatra no manao ny tsy mety. Anjaran'ny olom-boavonjy koa ny mijoro ho vavolombelona amin'ny fitondran-tena. Iainana ny famonjena izay raisina amin'ny alalan'ny asa, sy ny atao rehetra.